को’रोना सं’क्र’मि’त युवकले जब सडकमा कारको अगाडी सुतेर राखे यस्तो माग, प्रहरीले पनि तुरुन्तै गरिदियो पुरा ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/को’रोना सं’क्र’मि’त युवकले जब सडकमा कारको अगाडी सुतेर राखे यस्तो माग, प्रहरीले पनि तुरुन्तै गरिदियो पुरा !
एजेन्सी । विश्वव्यापी रुपमा को’रोना फै’लिए’को बेलामा वि’श्वभ’रवाट कहिले काँही अनौ’ठा खबर सार्वजनिक हुने गरेका छन् । हालै भारतको उत्तर प्रदेश को मेरठ शहरमा एक युवाले अनौठो ब्यवहार गरेका छन् । एक जना युवक मेरठ शहरको बेगमपुल चौराहामा सडकमै गाडीको अगाडी सुते । उनले आफुलाई को’रोना लागेको र कसैले पनि आफुलाई नछुन भन्दै गाडीको अगाडी लम्पसार परेका थिउ ।
बिच सडकमा यस्तो हर्कत गरेपछि ति युवकलाई प्रहरीले सम्झाई बुझाई गरेर एम्बुलेन्समा राखेर अस्पताल तर्फ लगेको छ । आफुले आग्रह गर्दा स्वास्थ्य सेवा नपाएका ति युवाले सडकमा आएर तमासा गरेपछि भने तुरुन्तै एम्बुलेन्समा बसेर अस्पताल जान पाएका छन् । बीच सडकमा युवकले त्यस्तो गरेपछि प्रहरी र स्थानिय अचम्म मानेका थिए । सडकमा कराउँदै आफु कोरोना सं’क्र’मित हुँ भन्दै एउटा कारको अगाडी गएर सुतेका थिए । उनले स्वास्थ्य विभा’गलाई आफ्नो स्वास्थ्य परिक्षण नगरिदिएको आरोप लगाए ।
म कोरोना संक्रमित हुँ भनेर भन्दा पनि स्वास्थ्य विभागले आफ्ना स्वास्थ्य परिक्षण नगरिदिएको उनको आरोप थियो । सडकमै मानिस सुतेको खबर पाएर गएको प्रहरीलाई पनि ति युवकले मलाई नछुनुस् म को’रोना सं’क्र’मित हुँ भनेका थिए । उनले त्यसो भनेपछि प्रहरी पनि पछि हटेका थिए । तर प्रहरीले सामाजिक दुरी कायम गरेर प्रहरीले उनलाई एम्बुलेन्समा चढाएका थिए ।
प्रहरीलाई नजिक आउन नदिएका युवक एम्बुलेन्स आएपछि भने शान्त भएका थिए । उनले एम्बुलेन्समा बस्न पनि आनाकानी गर्न लागे । तर प्रहरीले उनलाई सम्झाई बुझाइ गरेर एम्बुलेन्समा राखेर अस्पताल लिएर गए । उनी वास्तवमा को’रोना संक्र’मित हुन् की होइनन् भन्ने कुरा स्वास्थ्य परिक्षण पछि मात्र थाहा हुने भारतीय सञ्चार माध्यम आजतकले लेखेको छ ।